Hoyga Hollywood Hills, Jilayaasha Monty Python, ayaa laga daadiyey - dadka - Teles RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE » La maison d'Hollywood Hills, acteur des Monty Python, évacuée – people
Hoyga Hollywood Hills, aktarada Monty Python, ayaa laga daadgureeyay - dadka
LOS ANGELES (Variety.com) - Guri ka tirsan majaajiliistaha Monty Python, Eric Idle, ayaa habeenkii isniinta ka daadgureeyay ka dib markii lagu dhawaaqay helitaanka walxaha budada ah ee boostada. Si kastaba ha noqotee, masuuliyiintu waxay mar dambe tilmaameen in tani ay tahay digniin been ah.
Sida laga soo xigtay NBC4, qof degane ah ayaa booliiska ugu yeeray Floye Drive - waa gaabis gaaban oo ka baxda Mulholland Drive ee Hollywood Hills - at 18h23. ka dib markii uu furay warqad waraaqaha aqoonsiga ah oo ka timid Thailand kaas oo soo saaray budada cad.
Bilayska iyo dabdamiska martigeliso jawaab halista ah iyo laba haween ah ayaa loo qaaday isbitaalka taxadar ahaan, ayaa sheegay in saxaafada madax ahaa guutada dab Los Angeles  Si kastaba ha ahaatee, baadhitaanka lagu ogaaday in " wax khatar ah ma jirin. No kiimiko ma helin, "ayuu yiri Holland. "Ma jirin wax budo ah si loo helo."
Warqadda tuhunka ah waxay ahayd ogaysiis ka timid shirkad shixnadeed oo baakad ka timid. Waxa la soo sheegay sida budo waxay ahayd "boodh yar oo laga yaabo inay ka soo baxdo baqshadda," ayuu yiri Holland.
Guriga waa hudheello Spanish ah oo ku yaal xNUMX m² oo ku yaal ku dhowaad saddex meelood oo meel ka mid ah caleemo. . Waxay ka tirsan tahay Idle iyo xaaskiisa, Tania Kosevich.
Iidle, sano 76, waa majaajiliiste Soomaali ah oo actor caan ku ah in uu ka qayb Hobollada majaajilada ah Monty Python ee Flying rogadka, kaas oo abuuray taxane telefishan filimka kaftan ah sawir "Monty Python iyo gashtay ah", "Life of Brian Iyo "Macnaha nolosha".
Idle wuxuu daabacaa "Spamalot" Broadway, oo laga soo qaatay filimka "Holy Grail". Waxa kale oo uu leeyahay kaalin muhiim ah filimyada sida "Ella Enchanted" iyo "Shrek Third" iyo "Simpsons".
Kosevich waa nooc hore oo Playboy ah. Waxay iyo Idle waxay isguursadaan tan iyo 1981 oo ay leeyihiin gabar.
Infinix waxay soo bandhigeysaa HOT 7 Isticmaalayaasha Isticmaalaya inay ku raaxaystaan ​​waxqabadka iyo madadaalada - Abidjanshow.com
Sophie Davant: Iskudhaf wayn oo qarsoodi ah sababtoo ah kufsi cusub oo xun!